Ahoana ny fomba hijerena ireo antontan-taratasy vao haingana ao amin'ny Windows 10 sy ny menio Start | Vaovao momba ny gadget
Antontan-taratasy vao haingana tao amin'ny Windows 10
Mitady ny faritra an'ny Antontan-taratasy vao haingana tao amin'ny Windows 10? HHatramin'izao dia tsy mbola hitako fa tsy nipoitra tao amin'ny menio Start ny singa "Documents vao tsy ela", ny zava-misy dia nanontany ahy ny namako iray hoe ahoana no ahitako ireo antontan-taratasy vao nisokatra ary tamin'izay no tsy nahitako an'ity zavatra ity.
Raha nahita ity entana ity tao amin'ny menio fanombohan'ny namana hafa aho dia nieritreritra fa mety ho safidy ho fanaingoana no tsy nety. Ka rehefa avy nijery vetivety aho dia hitako fa tsy nijanona ilay safidy ary ankehitriny lazaiko aminao ny fomba ahafahanao mampandeha azy mba hisehoan'ny singa "Antontan-taratasy vao haingana" ao amin'ny menio Start anao.
1 Fisie vao tsy ela ao amin'ny Windows 10
2 Antontan-taratasy vao haingana tao amin'ny Windows XP
Fisie vao tsy ela ao amin'ny Windows 10
Mba hahafahanao mahita ireo rakitra na antontan-taratasy vao haingana indrindra tao amin'ny Windows 10, ampandehanana fotsiny ny fiasa ahafahantsika manatanteraka azy. Ary i Microsoft dia tsy te hanadino ao amin'ity kinova vaovao an'ny rafitra fiasa malaza ity safidy mahaliana sy ambonin'izany rehetra ilaina.
Voalohany indrindra sokafy ny menio fikirana Windows 10, izay azonao idirana avy amin'ny Start Menu na amin'ny alàlan'ny fitambarana key Windows + i. Rehefa tonga eo dia mandehana any amin'ny fizarana "Personalization".
Safidio izao "Start" ary ampiasao ny safidy "Asehoy ireo entana vao nosokafana". Raha tsy mampihetsika azy ianao dia tsy ho hitanao ireo rakitra sy antontan-taratasy vao haingana nosokafanao tao amin'ny Windows 10.
Raha mampiseho ny Start Menu ary mifidy fampiharana manokana isika, amin'ny tranga misy antsika Microsoft Excel, amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra havanana dia ho hitantsika ireo rakitra izay nosokafana vao tsy ela akory izay.
Antontan-taratasy vao haingana tao amin'ny Windows XP
Tsindrio ny menio fanombohana ary avy eo dia tsindrio ny bokotra totozy ankavanan'ny bokotra manga eo ambanin'ny menio. Hahazo varavarankely kely ianao manao hoe "Properties". Jereo ny sary:
Araka ny hitanao amin'ny sary teo aloha, ny singa "Documents vao tsy ela" dia tsy miseho eo amin'ny menio.
Apetraho eo am-baravarankely ilay mpanondro izay milaza hoe "Properties" ary kitiho indray mandeha. Hiseho ity varavarankely manaraka ity:
Tsindrio ny bokotra "Customize" ary eo am-baravarankely izay misokatra, safidio ny kiheba "Safidy mandroso".
Izao dia tsy maintsy asio ny boaty "Asehoy ireo antontan-taratasy vao nosokafana vao avy eo" ary tsindrio ny "OK", hikatona ny varavarankely Satria mbola hisokatra ny varavarankely "Taskbar sy Start Menu Properties", kitiho ny "Ampiharo" ary avy eo "OK" hanidiana azy.
Afaka mahita ny antontan-taratasinao vao haingana avy amin'ny menio Start ianao:
PFarany, tadidio fa raha misy antony tsy tianao olona hahita ireo antontan-taratasy izay nosokafanao vao haingana dia azonao atao ny mamafa ilay lisitra. Mba hanaovana izany, avereno ny dingana 1 ka hatramin'ny 3 ary indray mandeha ao amin'ny kiheba "Safidy mandroso" ao amin'ny fikandrana "Customize the Start menu", dia tsindrio fotsiny ny bokotra "Delete list".
RTadidio fa tsy hamafana ireo antontan-taratasy nampiasanao tato ho ato, fa hamafana azy ireo amin'ny lisitra "Documents vao tsy ela" ary rehefa ampiasainao indray dia hiseho ao amin'ity lisitra ity indray izy ireo.
EManantena aho fa nahita ity fampianarana ity ianao manampy ny Windows 10 fisie vao tsy ela ary XP. Arahaba voaloboka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Antontan-taratasy vao haingana tao amin'ny Windows 10
hace 15 taona
Salama Alejandro, afaka andro vitsivitsy dia hanandrana hamaha ny fisalasalanao momba ny aimp aho, ho hitantsika ny fomba fandraisam-peo azy sy ny fomba fanaingoana ny feo.
Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra, ankasitrahana izany. Miarahaba.
Salama vinaingitra, androany hitako nitety Internet ny pejinao ary toa nahaliana ahy farafaharatsiny izany zavatra kely hitako izany, heveriko fa ny toro-hevitrao rehetra dia hahasoa ahy tokoa, efa nanao ny dingana aho mba hananako ilay singa. ny antontan-taratasy vao haingana ary heveriko fa tena ilaina, tiako koa ny milaza aminao fa nahita anao aho satria nitady vaovao momba ny fikirakirana ny mpilalao iamp klasika aho dia efa hitako izay nohazavainao momba ny fametrahana azy ary tena tsara izany, inona aho te hanampy anao ianao dia ampianaro aho hikirakira ny safidinao handraisana cd ary mitovy ny feon'ireo hira rehetra satria nanangona azy ireo tamin'ny loharano maromaro aho ary samy hafa ny volako, raha ny maheno azy ireo ato amin'ity mpilalao ity Tsy misy olana ve satria araka ny nolazainao dia avoaka ho azy ny volabe mba hilalao fa handoa hetra ahoana no hataoko? Hankasitrahako ny fanohananao, hahita anao tsy ho ela
Maroon dia hoy izy:
Misaotra ny fika tsy fantatro hoe afaka mahita ireo antontan-taratasiko tato ho ato ianao. Manana raha toa ianao ka mametraka foana ny tetika Windows hohazavaina tsara. Fiarahabana avy any Caracas.
Mamaly an'i Maroon
Salama Maroon, faly aho fa nahasoa anao ilay fika. Mbola hametraka fikafika bebe kokoa aho, satria na dia toa tsotra aza izy ireo indraindray, tsy ny olon-drehetra no mahalala azy ireo ary ianao izao, ohatra, efa fantatrao izay tokony hatao hampisehoana antontan-taratasy vao haingana, sa tsy izany? Manisa amin'ny Vinagre Asesino amin'ny fisalasalanao momba ny IT. Miarahaba.
zazavavy chula dia hoy izy:
Salama tsara tarehy ... misaotra amin'ny toro-hevitra omenao. taloha be ny sipako nikatona nianatra, vao haingana miaraka amin'ny hevitra fa tsy hahita ny zavatra ataony amin'ny alina ... misaotra anao efa fantatro ... oroka sy fisaorana.
Mamaly an'i nenita chula
Oops fa nieritreritra aho fa tsy maintsy mametraka zavatra hahitanao ireo antontan-taratasy vao tsy ela akory izay. Tsara kokoa noho izany, misaotra.
Hola zazavavy chula hitanao fa misy olona tsy tia mampiseho izay ao anaty antontan-taratasy vao haingana. Fa maninona no? Ankehitriny dia efa hainao ny mahita azy ireo ary tsy fantany fa mahita azy ireo ianao 😉
Hola Pedro tsy misy apetraka raha hijery ireo antontan-taratasy vao nosokafanao. Hitanao ve ny mora? Miarahaba antsika rehetra.
Manana ny XP Colossus napetraka aho, ary ny marina dia miasa tsara izy io afa-tsy zavatra vitsivitsy toa ny tsy ahafahako mampiseho ireo fisie vao tsy ela akory, eny fa na dia ny safidy ahafahako miala amin'ny bokotra fanombohana araka ny nohazavaina etsy ambony aza. Mazava ho azy fa novaina tao amin'ny fisoratana anarana izany. Ny fanontaniako, fantatrao ve ny fomba ahafahana mamela ity safidy ity?
helina vinaingitra: fitetezana hitako ny pejinao satria tiako ny mianatra fahaiza-manao amin'ny solosaina ary toa nohazavaina tsara tamiko, tsara ianao amin'ny maha mpampianatra anao satria manazava amin'ny dingana tsotsotra sy mazava ianao. Misaotra betsaka amin'ny fanampianao.
Tongasoa eto ianao Mauricio, manantena aho fa hitsidika ny bilaogy foana ianao ary mankafy ny lahatsoratrao. Miarahaba.
Salama, mahaliana ity fisie vao tsy ela ity fa manana OLANA aho ... amin'ny pc misy Win xp sp2 dia tsy mahazo afa-tsy ireo rakitra telo farany aho, raha eo amin'ny birao birao dia misy fisie 3 matetika ary tena miasa be izany ry namana lazao ahy ny ataoko mba hahitana ireo rakitra 10 na vao tsy ela koa hita ao amin'ny solo-saiko, misaotra anao pro mandefa mailaka ahy. veloma
Ny Alemanina no fotoana voalohany namakiako olana toa anao. Tena tsy fahita izany, mazàna izy ireo dia miseho na tsy miseho, fa antontan-taratasy vitsivitsy ihany no tsy miseho. Ho hitako raha afaka mahita vaovao aho. Fiarahabana.
roanfo dia hoy izy:
Salama vinaingitra manana olana amin'ny antontan-taratasy vao haingana aho ary rehefa manaraka ny torolalanao amin'ny faritra ambany amin'ny safidy handrosoana aho dia tsy hita ilay safidy hampiasana na hanafoanana ireo antontan-taratasy vao haingana nahazo fandresena xp
Mamaly an'i roanfo
vinaingitra dia hoy izy:
roanfo izay mitranga amin'ny maro hafa ary matetika vokatry ny virus. Tsy mora ny vahaolana ary tsy azoko atokisana koa ilay rakitra izay manamboatra azy ka tsy afaka mampifandray azy aho. Miala tsiny raha mahita zavatra azo antoka aho.
Valio ny Vinaingitra
Salama, mila fanampiana aho hanesorana ny mpampiasa admin, inona no azoko atao?
Valio ny rohy
Faly aho mahita ny olona toa anao. Manana ny tsy fahafahako mampavitrika antontan-taratasy vao haingana aho, efa nataoko tsikelikely izany nefa tsy miseho amiko ny fikandrana ary toa anao koa ny safidy Advanced, tsy miseho ilay famantarana etsy ambany izay milaza «Safidio ity safidy ity… . ary koa ilay boaty kely izay ampandehanana ny "Asehoy ......", hita fa banga daholo ireo boaty ireo .. ampio aho azafady, inona no hataoko?
Valiny amin'i LETY
AOKA ny olanao dia ny hoe misy virus manova ny rezistra Windows. Mila manova azy indray ianao ary tsy mora izany. Angamba manaova fampianarana.
Manana ny tsy fahafahako mampavitrika antontan-taratasy vao haingana aho, efa nataoko tsikelikely fa tsy toa ahy ny fikandrana ary koa aminao ny safidy Advanced, tsy miseho ilay famantarana etsy ambany izay milaza hoe "Safidio ity safidy ity… . ary koa ilay boaty kely izay ampandehanana ny "Asehoy ......", hita fa banga daholo ireo boaty ireo .. ampio aho azafady, inona no hataoko?
ataovy ny haingana indrindra mba hahitanao raha mamaha an'io olana io aho
yakaroe dia hoy izy:
Tsy hitako ny safidy ahafahana mamela ireo antontan-taratasy vao haingana. Nanaraka ny fomba fiasa araka ny voalaza aho fa tsy hita ilay safidy
Mamaly an'i yakaroe
Fatima sanchez dia hoy izy:
Salama, mahafinaritra be ny fampianarana, izay notadiaviko fotsiny fa tsy hita ny safidy hampiasana ireo antontan-taratasy vao haingana, jereo raha manana fahalalana bebe kokoa momba ilay raharaha ianao ary omeo tanana kely izahay.
Valiny tamin'i Fatima Sanchez
Salama, nanaraka ny torolàlana tsikelikely aho. Asehon'izy ireo fa hahita antontan-taratasy vao haingana, saingy ao amin'ny solosainako io safidy izay tondroinao io: "Asehoy ireo antontan-taratasy vao nosokafana". Misy fomba hafa anaovana azy ???
Mike @ itcs dia hoy izy:
Tsara !! Tena tsara Vinaingitra rehetra. Lazaiko aminao fa manana olana amin'ny lisitry ny fisie vao tsy ela aho, ny rafitra miasa dia Windows Vista Business. Ny mitranga dia izao manaraka izao: tsy manavao ny lisitra izany! Raha vao mamafa ny lisitra aho dia "feno" indray ary avy eo tsy mitanisa ireo antontan-taratasy misokatra farany.
Manantena aho fa nanazava tsara azy ary azonao ny zavatra ezahiko ampitaina. Toy izany koa, misaotra betsaka. Volana nanampy betsaka tamin'ny fotoana maro ianao.
Valio i Mike @ itcs
Fototra fa ilaina. Misaotra anao.
Salama, ny tetika navelan'izy ireo dia toa milay be.
Eto aho manana olana ho azy ireo raha mahita raha miara-miasa amiko izy ireo dia manana solosaina finday acer 4720z aho ary tsy mametraka ahy ireo mpamily feo dia naka mpamily maromaro aho ary tsy misy mahita raha manampy ahy amin'ity fahamarinana nohaniko ity aho namela ny olana kely vintana
windosito dia hoy izy:
Ny lafiny tokana tsy azoko dia ny tsy hisehoan'ity safidy ity ao amin'ny menio misy ahy, fantatrao ve izay fomba hikirakira Windows ka hisehoany indray?
Mamaly an'i Windosito
cesarlalp dia hoy izy:
Salama, hitako izay nohazavainao momba ny "Documents vao haingana" raha ny amiko dia efa azoko toy ny mahazatra, ny olana dia raha ny amiko dia voafafa ary tsy miseho ny safidy amin'ny fananana, ahoana no hahazoako ny "Documents vao haingana "an'ny Hitanao indray ve ny menio fanombohana? misaotra indrindra
Mamaly an'i cesarlalp
Ianao, anao dia hoy izy:
fandraisan'anjara tena tsara ,,, tsy haiko hoe mandra-pahoviana no nanaovana azy nefa tsara,
Mamaly an'i tutus
Salama, mangatsiatsiaka sy mora be ny zava-drehetra, fa ny olana mahazo ahy dia ny tsy fisehon'ny safidy antontan-taratasy vao haingana, banga ny toerana, malalaka. Inona no azoko atao?
TRINY dia hoy izy:
Sahala amin'i Felix sy tutus aho. Toa banga ity safidy ity. Manantena aho fa afaka manampy anay ianao.
Ary vitako izany. raha mahaliana anao dia ampahafantaro ahy. Ny ekipako dia Xp.
MANAO WINDOWS XP IZAY TSY MANANA NY FIZARANA FILESAN-KEVITRA. AHOANA NO AZONAO ATORANA AN'IZANY?
Valiny amin'i MANOLO
Jorge Luis m dia hoy izy:
Misaotra noho ny fanampiana afaka mamafa ny mombamomba ny solosaiko
Mamaly an'i jorge luis m
javilin dia hoy izy:
Salama, ny olako dia ny tsy ahitako ny folder = Documents vao tsy ela ao amin'ny C: Documents and Settings Ireo mpampiasa rehetra ary tsy takona afenina izany, inona no azoko atao? Toy ny hoe voafafa ilay fampirimana fa tamin'ny voalohany raha misy ireo antontan-taratasy vao haingana fa tsy ao amin'ny disk C, azafady mba ampio aho, mialoha misaotra, arahaba
Mamaly an'i javilin
chiquinquira dia hoy izy:
Salama! misaotra ny pejinao Nanaraka ny torolalana omenao aho ary hitako farany ireo antontan-taratasy vao tsy ela akory izay.
Mamaly an'i chiquinquira
Salama tsara fa tsy tonga amin'ny dingana 3 ny fanontaniana hoe "Asehoy ireo antontan-taratasy vao nosokafana vao tsy azoko jerena satria ??? Miandry ny valinteninao aho misaotra.
fa diso ny mailako
gerbasium dia hoy izy:
salama aho mitady baiko hanatanterahana, ao amin'ny notepad na mampiasa baiko hanokatra mivantana ny fampirimana antontan-taratasy vao haingana, azonao atao ve izany? misaotra
Mamaly an'i gerbasio
feno fankahalana dia hoy izy:
mba hisehoan'ny safidy antontan-taratasy vao haingana dia nataoko izay nolazainao fa amin'ny fizarana safidy mandroso izay tsy misy ifandraisany amin'ireo antontan-taratasy vao haingana
Valiny amin'ny fankahalana
PETER M. dia hoy izy:
Salama vinaingitra, tena mampianatra ny pejinao izay fantatro fotsiny, indrisy fa tsy nanampy ahy ilay lahatsoratra satria ny safidy "DOKUMENTY TOKOA" dia tsy miseho eo amin'ny PC-ko ao am-baravarankely fananana manokana. Misaotra amin'ny maody rehetra ary miarahaba anao
Valiny amin'i PEDRO M
CARLOS NA dia hoy izy:
Salama amin'ny raharaha apetrako rehefa manome safidy hafa aho, tsy miseho ny safidy hanakanana ahy hampiseho amiko ireo dokambarotra farany
Valio amin'i CARLOS O
Mipetraka i Melano dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao namana, nila ho fantatro izany mba hampavitrika azy amin'ny mpampiasa nanontany ahy.
miaraka amin'ny fitiavana Afinca Melano
Valiny tamin'i Afinca Melano
Monika dia hoy izy:
ELIANA dia hoy izy:
MPAMONO VINA GERERA TOMPO
MBA AMPIO AHO AZAFADY!
Izaho dia manana mpanonta epson lq 1070+ esc / p2 ary tsy manonta amin'ny rafitra fiasa misy azy. Rehefa manao ny fitsapana an-tanana dia manonta tsara.
Ankasitrahako ny fiarahanareo miasa
Valiny amin'i ELIANA
leydi paola dia hoy izy:
misaotra ny trukitoo jijijijiji mahafinaritra
Mamaly an'i leydi paola
Jhubran dia hoy izy:
Inona no tokony hatao raha toa ka tsy aseho taratra amin'ny dingana faha-3 ny "Asehoy ireo antontan-taratasy vao nosokafana"? Nanandrana nanao izany tamin'ny fampiasana gpedit.msc aho saingy tsy hitako izay rakitra nampiasana ...
Valiny tamin'i Jhubran
midomeuez dia hoy izy:
Misaotra amin'ny fampidirana. Efa ela aho no nitady an'ity fampahalalana ity.
Mamaly an'i midominguez
ROBERT CASTLE dia hoy izy:
Amin'ity lahatsoratra ity dia ilaina ny manamarika hoe aiza no ahitantsika ny toerana tena misy ilay fampirimana, satria tsy eo amin'ny toerana ilazanao anay foana no misy azy io, na tsy hitako izany. Mora tamiko foana ny nahita an'ity fampirimana ity, saingy rehefa manafatra ny masinina aho dia tsy hitako intsony. Manantena aho fa azonao atao ny milaza amiko izay azoko atao hampisehoana azy ao amin'ny lahatahiry fakany, satria tsy ao koa ilay fampirimana mpampiasa.
Miarahaba ary misaotra mialoha.
Valiny amin'i ROBERTO CASTILLO
Salama, sendra nanana cd nisy ny fotoam-pialan-tsasatro aho, ary tadiaviko ny vintan-dratsy fa nanjavona izy, fa ny sary dia tao amin'ny firaketana, izany hoe ao an-TRANO -> DOKUMENTA, misy ny sary rehetra, na ny ankamaroany, ary mieritreritra aho fa afaka mamerina azy ireo, rehefa manindry ny iray amin'ireo sary ireo aho dia mangataka ahy mba hametaka kapila ao anaty drive E (izany hoe ampidiro ilay cd very), fa ny fanontaniako dia hoe afaka mahita ireo sary ve aho izany dia ao amin'ny Start -> DOCUMENTS nefa tsy apetrakao ilay cd izay mazava ho azy fa tsy azoko ??, misaotra
DavidBest dia hoy izy:
Waoooooooooooooooooooo !! Tsy haiko hoe maninona aho no kivy satria tsy eto i Daviid! Niova ny raharaha ..
Tena tsara. Vinaingitra manitrao. Saingy, heveriko fa kely fotsiny ny fanazavanao zavatra tena tsotra ka ny zaza 5 taona dia afaka manao izany amin'ny alàlan'ny famakiana fotsiny sy hijerena kely fotsiny.
Ny sasany manontany tena avy eo hoe inona no ataonao eto "gilipoyas" raha tena fanabeazana fototra hahaha ps eny fa fanabeazana fototra izany ary mandeha amin'ny Internet aho mitady forum na tranokala handao ny hevitro momba ny eritreritro.
Izay tsy tia mikoty azy ^, ^
Valiny tamin'i DaviidBest
Victor Tsy manam-pahaizana momba izany aho. fa heveriko fa amin'ny anao dia eny, very ny cd anao ary ny PC-nao tsy mitahiry kopian'ny rakitra tsy ho hitanao ny sary = '(..
hey misaotra betsaka tamin'ity fikafika ity no tena tsara indrindra, satria hamono ahy ny rahalahiko ...
Hot dog dia hoy izy:
Salama vinaingitra, hitako ny tranonkalanao androany ary te-hanontany anao aho ary milaza aminao fa tsy miseho amiko io safidy io, vao mainka fisotroana fotsy no fisehoana voalohany satria tsy manana doc ny kinovan'ny XP. tato ho ato
Valiny tamin'i Pancho
Tsy maintsy manitsy ny rezistra ao amin'ny windows ianao, noho izany dia manokatra ny regedit izahay (avy amin'ny menio fanombohana, mihazakazaka, regegit)
Andao handeha amin'ity fanalahidy manaraka ity ao amin'ny firaketana ny windows:
Ovao ho amin'ny fisoratana anarana ho an'i XP COLOSUS
HKEY_CURRENT_USER Mpandinika Microsoft WindowsVersion Policies Explorer
Ao no hanovantsika ny masontsivana fanalahidy toy izao:
'NoRecentDocsHistory' —–> dia ao amin'ny «1» novainay ho «0»
'NoRecentDocsMenu' ——-> dia ao amin'ny «1» novainay ho «0»
Averinay indray ny pc, ary hita ao amin'ny menio fanombohana indray ny fampirimana antontan-taratasy vao tsy ela akory izay
tena tsara ny tutorial anao nanampy ahy betsaka misaotra
misaotra noho ny fanampiana ny olan'ny antontan-taratasy vao haingana teo amin'ny menio fanombohana.
Tena nanampy ahy izy io.
DJ dia hoy izy:
Azafady, ny fahalianako dia ny hoe raha misy ny fomba hikirakirana ireo antontan-taratasy vao tsy ela akory izay mba hamonjy "docs.de teny" fotsiny fa tsy ny hafa toy ny mozika sy horonan-tsary.. sns. Misaotra mialoha.
Valiny amin'i DJ
Misaotra betsaka anao noho ny fanazavana ny vinaingitra misy sary ary famantarana mora kokoa ok
Misaotra betsaka noho ny vaovao, saingy manandrana manao ireo dingana ireo aho ary tsy hitako ny safidy ahafahana manome antontan-taratasy vao tsy ela akory izay. Rehefa manao ny etsy ambony aho dia tonga any amin'ny kiheba mandroso Safidy, ary ilay safidy "boaty fanombohana vao haingana" ihany no azoko fa tsy ny tapany ambany. Misaotra .. !!!
mpijirika! dia hoy izy:
Inona no izy, tsara izany fika izany, saingy tsy hitako io safidy io hametrahana ireo antontan-taratasy vao haingana, ahoana no hataoko?
Mamaly an'i haqker!
YOESLIN dia hoy izy:
HELLO VINEGRE IZAKO dia manana olana mitovy amin'izany, saingy ny tsy fitoviana dia ny tsy fahazoako misafidy haneho dokambarotra vao misokatra… Nataoko daholo izay fepetra nolazainao nefa rehefa nahazo safidy hafa izay tsy miseho amiko nefa tsy hitako. FANTATRA…. Ampianaro aho PORFISSS
Valio amin'i YOESLIN
Salama manana olana mitovy amin'ny yoeslin aho, tsy miseho io safidy io. raha afaka manome safidy hafa ianao dia misaotra betsaka
Edna dia hoy izy:
Ireo izay tsy mahita ny safidin'ny 'antontan-taratasy vao haingana'
azo inoana fa nisafidy ny safidy faharoa an'ny Start Menu, izany hoe, 'Start Start Menu'. Raha ovain'izy ireo amin'ny safidy voalohany araka ny aseho amin'ny fikandrana faharoa amin'ny mini tutorial dia mila manaraka ny torolàlana izy ireo.
Aorian'izany dia afaka miverina amin'ny menio efa fanaony izy ireo.
Mamaly an'i Edna
Maria Elena Zidar dia hoy izy:
Fanazavana tsara !!! Nataoko 🙂 misaotra
Valiny tamin'i María Elena Zidar
Salama e; Tena Misaotra !! Nanampy ahy androany izy io, tsy fantatro ny fomba hahitana ireo antontan-taratasiko vao haingana.
Paola Munoz dia hoy izy:
Fomba iray hafa hahitana antontan-taratasy vao haingana ny fanarahana ity lalana manaraka ity
C: Antontan-taratasy sy fananganana ary ny anaranao vao tsy ela akory izay, raha tsy hita io fampirimana io dia mankanesa any amin'ny takelaka fanamarinana Folder Control Panel ianao dia afaka mampiseho ireo rakitra sy lahatahiry miafina rehetra - >>> ekenao ary izany ihany
Valiny tamin'i Paola Munoz
Tesla dia hanokatra ny magazay voalohany any Espana any Barcelona
Miaraka amin'ny totozy Razer Basilisk dia hankafizinao ny FPS toy ny dwarf misaotra ny mitarika azy